Gcina iiNdaba zoPapasho kwisiCwangciso seNtengiso sika-2009 | Martech Zone
Gcina iiNdaba zoPapasho kwisiCwangciso seNtengiso sika-2009
NgoLwesine, uJanuwari 29, 2009 Douglas Karr
Umhlobo olungileyo uLorraine Ball, obaleka Iarhente yentengiso yaseIndianapolis ebizwa ngokuba yiRoundpeg, usebenze nam kulo nyaka uphelileyo kubathengi abambalwa. Esinye sezifundo zam endisifunde kuLorraine kukufikeleleka okumangalisayo okukhutshiweyo kumaphephandaba. Kuyamangalisa ukuba zingaphi iindawo ezithengisa izinto ezikhutshiweyo- kwaye zingaphi ezithi ekugqibeleni zingene kwiiblogi. Oku kunokuba yinto enkulu yokunxibelelanisa umva, igunya, kunye nokufumana igama kwinkampani yakho.
Mhlawumbi okuphawuleka kakhulu kukuba awunyanzelekanga ukuba ulinde umsitho omkhulu ukuba wenzeke kwinkampani yakho ukupapasha ingxelo. Into elula njengesibhengezo se-webinar okanye isifundo esitsha secandelo yinto entle! Musa ukuphungula ukukhutshwa kweendaba kwisicwangciso sakho sokuthengisa sika-2009. Enkosi kuScott Whitlock kwi I-Flexware Innovation, inkampani yetekhnoloji yokuvelisa. UScott undishiyele inqaku ndibuza malunga neendawo ze-PR endandizicebisa ngaphambili kwaye ndaye ndacinga ukuba inokwenza iposti enkulu yebhlog.
Ezo ndawo zithengiswayo PRWeb kwaye QHUBA ukuba ungumthengisi ozenzayo. UkuBhala ukuKhutshwa kweNgcaciso yinto encinci yobugcisa ukuba ufuna ukuba bafumane imilenze, nangona kunjalo. Fowunela uLorraine ukuba ufuna uncedo apho!
tags: coca colaizinga lokuguqulwaIvenkile ye-ekern
Unokukhetha njani uMyili weWebhu
Enkosi ngekhonkco kunye nenqaku Doug. Siza kube sinyusa usetyenziso lwethu lwentengiso ye-Intanethi kulo nyaka. Uncedo lwakho kum ngokobuqu belungakholeleki!
Enkosi ngekhonkco.. Ok, ndiphoswe njani? Inoba ebelele evilini. Ividiyo entle nayo!